Beranda » ကျန်းမာရေး » ဘာကြောင့် သွားတိုက် သင့်တာလဲ ???????
ဘာကြောင့် သွားတိုက် သင့်တာလဲ
သွားတိုက်တာက သွားတွေကို သန့်ရှင်းအောင် တိုက်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းထဲမှာ ဘက်တီး ရီးယားပိုးတွေ ရှိနေပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့ အစာတွေနဲ့ တံတွေး ဓာတ်ပ စ္စည်းတွေ ဓာတ်ပြုပြီး ဘက်တီး ရီးယား အကွက်လွှာ (Bacterial Plaque) တွေ ဖြစ်လာ ပါတယ်။ အဲဒီဘက် တီးရီးယား အကွက်လွှာ ထဲပါတဲ့ ပိုးတွေက သွားမျက်နှာပြင်မှာ တွယ်ကပ်ပြီး အစားအစာနဲ့ ဓာတ်ပြုရာက ထွက်လာတဲ့ ဒြပ်ပေါင်း (End Products or Metabolic Products) တွေက သွားတွေကို ပျက်စီး စေပါတယ်။
သွားဖုံးတွေကို လောင်ကျွမ်း စေပါတယ်။ သွားတွေမှာ ကပ်ငြိနေတဲ့ ဘက်တီးရီးယား အကွက်လွှာတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ရင်
ခံတွင်း သန့်ရှင်း သွားပြီး သွားပိုးစား ရောဂါ၊ သွားဖုံးရောင်တာ၊ သွားမြစ်ဝှမ်း ရောဂါနဲ့ ရေစီး ကမ်းပြို ရောဂါတို့ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် နိုင်ပါတယ်။
Ref: By Good Health
0 comments "ဘာကြောင့် သွားတိုက် သင့်တာလဲ ???????", Baca atau Masukkan Komentar